Qoondada haweenka miyaysan ka jirin Soomaaliland? | KEYDMEDIA ONLINE
Qoondada haweenka miyaysan ka jirin Soomaaliland?
Baarlamaanka Soomaaliland oo ka kooban 82 kursi, ayaa dhamaan loo doortay rag, waxaana doorashooyinkii dhawaan dhamaaday aan hal cod oo Golaha Wakillada ah helin hawenka Soomaaliland.
HARGEYSA, Soomaaliland - Waxaa soo gabagaboobay doorashooyinkii Soomaaliland ee soo billaawday 31-kii bishii la soo dhaafay ee May, waxaana golaha Wakiillada ku guleystay xisbiga Waddani ee uu hoggaamiyo Cabdiraxmaan Ciro, halka uu Golaha degaanka ku guuleystay xisbiga talada haya ee Kulmiye, Axsaabta mucaaradka ayaana wadar ahaan hantiyay kuraasta ugu badan.
Layaabka ayaa noqday in kaliya Saddex haween ah ku soo baxeen 303-da kursi ee la doortay, kuwaas oo saddex-duba ka yimid, Goloha Degaanka, taas oo ka dhigan in Golaha Wakiillada aysan wax kursi ah ku lahayn.
In ka badan hal Malyan oo codbixiyayaal ah oo ka qeyb qaatay doorashooyinka Soomaaliland, ayaa la sheegay in 47% aya ahaayeen haween, taas oo muujinaysa baraarug la’aan xooggan oo jirta.
Ma jirin qoondo haween oo gooni loo qorsheeyay, waxaana sidoo kale aad u yaraa musharixiinta haweenka ah ee u tartamay kuraasta labada Gole.
In ku dhawaad ay codeeyaan 500,000 oo haween ah, isla-markaana soo saari waayaan hal xubin oo ku matashada Baarlamaanka, ayaa la yaab ku noqotay dalkii la socday doorashooyinkii Soomaaliland.
Dhanka kale, Wasaaradda Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqda Aadanaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, ayaa dalbatay in baaritaan lagu sameeyo sababta ay ku dhacday in xitaa hal qof oo dumar ah ku guuleysanin in ay kamid noqoto baarlamaanka Somaliland oo ka kooban 82 xildhibaan.
War ka soo baxay Wasaaradda ayaa lagu yiri, “Murashaxiinta golaha baarlamaanka Somaliland, waxaa kamid ahaa gabdho lahaa hami siyaasadeed oo doonayay in ay kamid noqdaan golaha wakiilada oo ka kooban 82 kursi, nasiib daro dhammaan kuraasta waxaa ku guuleystay rag oo qof dumar ah kuma soo bixin tartanka.”